Istaraatijiyadda Ganacsiga |Tukesomalism.com | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan, March 9, 2016
4 Raggu Jecelyahay Dumarkuna Aan Dareensanayn!
Maxamuud Axmed Muuse, October 24, 2018
Afrikaan, December 7, 2019
Dhiig-karka, Yaa Halis Ugu Jiro Innuu Kudhaco Dhiigkarka?
Miski Cabdinuur Salal, March 31, 2019
Miski Cabdinuur Salal, November 30, 2019
Cabdijabaar Sh. Axmed — July 14, 2016
Maamulka istaraatijiyada ganacsiga waa nidaam ama qaab loogu tala galay in loo sharaxo hadafka ururka wali si tafaatiran. Si loo gaaro hadafyada shirkada waxaa loo baahanyahay in si fiican loo qeexi karo qaababka lagu gaari karo hadafkaas. Si loo gaaro hadafyada shirkada, shirkada waxay u baahantahay inay sameysato istaraatijiyad si fiican loo fahmi karo.
“Guul walbo waxay leedahay qaabab lagu gaari karo, haddii la waayo qaababka lagu gaari karo guulaha waxaa markii horeba qaldanaa hadafyada la hiigsanayay”
Maamulka istaraatijiyada ganacsiga waxay shirkadaha u horseedaa guulo, waa haddii marka horreba loo sharaxo si wanaagsan oo tafaatiran. Haddii ay jirto mugdi ku saabsan istaraatijiyada ganacsiga shirkada, waxaa adkaani karayso in la gaaro hadafyada shirkada ay leedahay.
Haddii aan shirkadeyda u sameeyo istaraajiyadda ganacsiga, suurta gal ma tahay inaan guulo ka gaaro hadafyada ururkeyga?
Haa, sawabtoo ah istaraatijiyada waa jaran-jarada ku gaarsiini karto guulaha aad rajada ka qabto inaad gaarto wakhtiyada dhaw iyo midka dheerba. Istaraatijiyada waxay qeexaysaa hadafyada loo abaabulay shirkada iyo guud ahaan hadafyada aad u baahantahay inaad guulo ka gaarto. Si arintaas horumar ugu gaarto waxaad u baahantahay inaad sameysato istaraatijiyad si wanaagsan loo tafaatiray oo cadeynayso inaad hadafkaas leedahay.
Marka ay timaado in la sameeyo go’aamada istaraatijiyada waxaa wanaagsan in 4 qeybood wax laga fiiriyo. Afartaas qeybood waxay kalla yihiin:
Iskaanka deegaanka (environmental scanning)
Dejinta istiraatiijiyadda (strategy formulation)
Fulinta istaraatijiyada (strategy implementation)
Qiimaynta iyo gacan ku haynta (evaluation and control)
Koow: Iskaanka deegaanka (environmental scanning): Iskaanka deegaanka waa la socodka, qiimeynta, iyo faahfaahinta ka imaanayso gudaha iyo waxyaabaha ka baxsan gudaha ururka shirkada. Markii ay timaado arintaan maamulaha sarre ee shirkada waa inuu sameeyaa la tashi dheeraad ah. Si cilmiyaysan waa inuu la tashadaa shaqaalaha ugu muhiimsan ee shirkada. Shaqaalayaasha ugu muhiimsan shirkadaada waa maamulka suuqgaynta, maamulka qeyraadka aadanaha, maamulaha IT-ga, iyo guud ahaan cidwalbo oo ugu muhiimsan shirkadaada.
Haddii aad diirada saarto labada qeybood ee aan soo sheegay “faahfaahinta ka imaanayso gudaha iyo waxyaabaha ka baxsan gudaha ururka shirkada” waxaad qorsheyni kartaa mustaqbalka wanaagsan ee shirkadaada.
Si aad ugu guulaysato arintaan iskaanka deegaanka waxaad u baahantahay inaad si fiican u aqrisato falanqeynta TDFH oo afka Ingiriiska lagu yiraahdo SWOT analysis.
TDFH waxay u taagantahay T=Waxyaabaha Taabbagalay, D=daciifnimo, F=Fursadaha iyo H=Hanjabaada. Xisaabta waxaa loo isticmaalaa in wax lagu xisaabiyo, waxay leedahay qaacidooyin loo maro markii la isticmaalayo xisaabta noocyadeeda kalle duwan. TDFH waa nimaan ay isticmaalaan ururada haddii ay tahay shirkadaha ganacsiga iyo haayadaha noocyadooda kalle duwan. Xarfaha aan soo gaabiyay TDFH waxay u taaganyihiin sidda xarfaha ingariiska oo kalle (SWOT).
TDFH– waa qaacido loo maro sidda lagu ogaani karo mustaqbalka shirkadaas. Waa nidaam ay isticmaalaan kooxda maamulka shirkada, iyagoo ku qeexaayo gudaha iyo dibadda shirkada oo saameyn ku yeelani doona qaabka ama hamdhiska mustaqbalka shirkada.
Falanqaynta TDFH waxaa loo sameeyay oo qayb ka ah geedi socodka qorshaynta guud ee shirkadaha taas oo hadaf maaliyadeed iyo mid hawlgalba lagu wado sannadka soo socda iyo xeelado loo abuuray si ay u dhamaystiraan hadafyada shirkada. TDFH waxay leedahay 4 qeyb labada qeyb ee ugu horeyso T=Waxyaabaha Taabbagalay (Strength), D=daciifnimo (weakness) waxaa loo isticmaalaa waxyaabihii ka qabsoomay gudaha shirkada.
T=Waxyaabaha Taabbagalay (Strength): Waxay tilmaamtaa taabayaasha sifooyinka wanaagsan, markaad wax badan rabto inaad ka ogaato waxaa loo baahanyahay inaad isweydiiyo su’aalooyin dhowr ah sidda:
Kobaca ganacsigaada marwalbo wuxuu u baahanyahay inaad raadiso fursadaha cusub iyo macaamiilka cusub ee imaan karo suuqa. Markaad raadinayso fursadaha kobaca ganacsigaada waxaad u baahantahay inaad horumariso nidaamka ganacsigaada sidda habka aad macaamiilka u gaarsiiyo allaabtaada, horumarinta qeybaha cusub ee allaabta iyo adeegyada iyo ballaarinta juqraafi ahaan.
Kooxda maamulka shirkada waxaa loo baahanyahay inay si fiican u falanqeeyaan TDFH-ka. Tusaale ahaan Tukesomalism markii la aas-aasayay waxaa la isweydiiyay maxay bulshada usoo gudbini kartaa oo ay kaga wanaagsantahay ururada kale ee wax qora. Dhammaan dadka qorista waa laga wada simanyahay, balse maxaan kaga duwanahay ururada markii loo fiiriyo baahidda bulshada ka jirta. Dabcan website-yada wax qora waxaan kaga duwanahay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin qorista maqaalada ganacsiga sidda xisaabaadka, suuqgaynta, maamulka, dhaqaalaha iyo siyaasada. Waxaan kale oo aan wax badan ka qornaa caafimaadka iyo arrimaha xiisaha leh ee bulshada.
Waxyaabaha cajiibka leh Tukesomalism ay qorto waxaa ka mid ah koorsooyinka lagu heli karo lacag la’aanta si Tukesomalism.com ay u dhisto garaadka bulshadeeda.
D=daciifnimo (weakness): Waa qeybta labaad TDFH-ka waxay timaamtaa daciifnimada ka jirto gudaha shirkada. Qeybtaan waxaa loo baahanyahay in si gaar ah loo horumariyo, sawabtoo ah waa halka shirkada ay ka liidato. Waxaana muhiimsan in qorsho cad loo sameeyo si ay shirkada ulla sii tartami karto shirkadaha kalle oo la midka ah. Si loo xaliyo daciifnimadaas ka jirta shirkada waxaa loo baahanyahay in la isweydiiyo su’aalahaa:
F=Fursadaha (Opportunites): Qeybtaan waa qeyb ka baxsan gudaha shirkada. Labadii qayb ee aan soo sheeknay T=Waxyaabaha Taabbagalay iyo D=daciifnimo waxay quseeyaan gudaha shirkada. Labada qeyb ee ugu dambeysa F=Fursadaha iyo H=Hanjabaada waxay diirasada saarayaan waxa ka jiro binaanka shirkada.
H=Hanjabaada (threats): Waa qeybta ugu dambeysa waxayna ka mid tahay qeybta labaad ee ka baxsan gudaha shirkada. Hanjabadaan ayaa noqoni karto noocyo badan aad waxbo ka qabani Karin mar-marka qaar, balse waxaa loo baahanyahay ayaa ah in xittaa la soo dhaweeyo in lalla yimaado wax ka qabadka arrintaan. Waxaana marwalbo muhiim ah in la isweydiiyo su’aalooyin ay ku dheehantahay maskixiyan:
Labo: Dejinta istiraatiijiyadda (strategy formulation). Waa habka loo dejiyo qorsheynta cusub ee ay wajahayso shirkada, wakhtiyada dhaw iyo wakhtiyada dheerba waxaa wanaagsan in shirkada dhinacyo badan wax ka fiiriso. Qeybtaan waa qeyb aad muhiim u ah shirkada, haddii aanan si fiican loo dejinin go’aanka ku aadan dejinta istaraatijiyada shirkada waxaa mugdi iyo madmadoow soo geli karo guulaha la sugaayay in la gaaro wakhtiyada dhaw iyo midka dheerba. Waxayna ka koobantahay sidda Istaraatijiyada shirkada (corporate strategy), istaraajiyadda ganacsiga (business unit strategy), iyo Istaraatijiyada howlgalka (Operational strategies).
Shirkadaha iyo warshadaha waxay u baahanyihiin inay wax badan ka ogadaan qaababka ay ku horumarini karaan waxyaabaha ay soo saaraan. Seddaxdaan qodob waa seddax qodob oo aad u wanaagsan in shirkadaada ay la timaado u jeedooyin si fiican u qeexi karo qodobadaan. Si aad guulo fiican u gaarto waxaad u baahantahay seddaxdaan qodob si fiican u fahanto qaasatan qodobka ugu horeeyo ee ka hadlaayo bayaanka hadafka shirkadaada. Seddaxdaanba waxaa wanaagsan si diiran inaad u qeexi karto haddii ay jiraan dhibaatooyin ka imaani karo seddaxdaan qodob waxaad u baahantahay inaad wax ka bedesho si aad guulo fiican u gaari karto ama aad ugu guulaysani karto shirkadaha kale ee aad loolanka kuwada jirtaan.
Seddax, Fulinta istaraatijiyada (strategy implementation). Waa istaraatijiyada loo baahanyahay in ay fuliso shirkada. Waxayna tilmaamaysaa qaabka lagu gaari karo hadafyada shirkada ay leedahay. Si loo fuliyo hadafyada shirkada waxaa muhiim ah in miisaaniyadda shirkada, barnaamijyada iyo nidaamka shirka la iswaafujiyo.
Afar, Qiimaynta iyo gacan ku haynta (evaluation and control). Qeybtaan waa qeybta ugu dambeysay. Maamulaha sarre ee shirkada ama ururada dowliga iyo haayadaha marka horre waxay u baahanyihiin inay soo helaan xog dhammaystiran si ay ku gaari karaan go’aamo wanaagsan. Gaarista go’aan wanaagsan waxay ku xerantahay sidda aad u raadiso xogta rasmiga ah ee loo baahanyahay ama shirkada gaarsiini karto hadafyadeeda. Marwalbo oo la raadiyo xogta muhiimka u ah shirkada waxaa suurta geli karo in la gaaro go’aan aad loogu qanacsanyahay.
Qiimaynta iyo gacan ku haynta waa la socodka iyo qiimaynta guud ee shirkada. Maamulayaasha sarre waa shaqo u taalo inay si gaar ah ulla socdaan gacan ku haynta shirkada. Waxaa wanaagsan hadafyadii la gaaray in la qeybiyo oo loo qeybiyo shaqaalaha ururka kuwa sidda gaarka ah loogu kalsoonyahay inay kasoo bixi karaan hadafyadaas.
Shaqaalaha waa kuwa marwalbo u taagan inay ururka ka caawiyaan hadafyadiisa. Dhammaan hadafyada ay leedahay shirkada hal qof oo kali ma gaaro karo, waxaa wanaagsan in shaqada la qeybiyo si qofwalbo la fiiriyo shaqadiisa/shaqadeeda ay ka wadaan shirkada. Qeybinta hadafyada iyo gacan ku haynta shaqaalaha shirkada waa arin u baahan xirfad gaar ah. Sawabtoo ah waa wax aad u adag in la maamulo bini’aadamka, maxaa yeelay bini’aadamka ma jecla in la maamulo. Balse hogaamiyaha wanaagsan wuxuu leeyahay astaamo uu kaga duwanyahay dadka kale. Si aad u noqoto hogaamiye wanaagsan marwalbo ixtiraam iyo wanaag u muuji dadka kulla shaqeeyo, noqo qof dadka dhagaysto.
“Si aad gacan adag ugu qabato horumarka iyo hadafyada ay hiigsanayso shirkadaada waxaad u baahantahay inaad abuurto & sameyso dhaqan iyo qiyam wanaagsan”
*Cabduljabaar Sheekh Axmed
Tags: Istaraatijiyadda Ganacsiga |Tukesomalism.com
Next post Cunto u Noole Un Ha Ahaannin Ee Cuntada Ku Noolaasho U Quudo |Tukesomalism.com
Previous post Yaa Diidan In Gabdhaheena Noqoni Karaan Ganacsato |Tukesomalism.com